Semalt: Nahoana no zava-dehibe ho an'ny SEO ny votoaty?
Inona no atao votoaty?
Ny votoaty sy ny SEO: ny fifandraisana
Famoronana votoaty azo jerena
Optimization ny votoaty noforonina
Mpanoratra Copywriter an'i Semalt dia manome ny votoaty fikarohana Optimized fikarohana
Ny votoatiny no mpanjaka.
Mety efa naheno an'io fehezanteny io imbetsaka ianao, saingy efa nanandrana ve ianao hahita hoe nahoana no miantso ny votoatin'ny mpanjaka izy ireo.
Satria ny votoatiny dia manan-kery hanentana ny laharan'ny tranokala ao amin'ny SERPs (Search Engine Result Pages).
Eny, io ihany no lafiny mamiratra. Raha misy lesoka ao amin'ny atiny, dia afaka misintona sazy Google ary mandaka ny tranokalanao ivelan'ny ligy.
Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hahalala ny votoatiny, SEO, ny antony maha-zava-dehibe ny SEO ny zavatra atolotrao, izay azonao atao mba hampivoarana ny kalitao atiny, ary tena mihoatra izany.
Ny fizarana farany koa dia misy vahaolana mahagaga izay afaka manampy ny votoatinao mihoatra ny mpifaninana ary hanana toerana ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana.
Ny votoatiny dia misy fampahalalana mahasoa izay atolotrao amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fantsona iray. Ity fampahalalana ity dia mety ho zavatra rehetra ary amin'ny endrika rehetra.
Mety ho lahatsoratra, sary, video, GIF, webinar, horonantsary mivantana, na zavatra hafa ao amin'ny tranokala, fantsona media sosialy, fampiharana (tranonkala sy finday), na amin'ny toeran-kafa rehetra.
Raha te hahalala bebe kokoa, jereo ireo famaritana atiny ireo avy amin'ireo manam-pahaizana 40 mahery ao amin'ny indostrian'ny varotra digital.
SEO (Search Engine Optimization) no fanamafisana ny kalitao sy ny habetsahan'ny fivezivezena voajanahary azon'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny milina fikarohana.
Raha toa ny tompona tranokala tsirairay, ny tanjonao dia ny hametraka ny tranonkalanao eo amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny SERPs (Search Engine Result Pages) dia hanampy ny SEO.
Androany dia mihodina amin'ny Google ny SEO. Aza misavorovoro àry raha misy olona manolotra ny tranokalanao araka ny Google.
Mba hahalalana bebe kokoa momba ny SEO, ny fitsipiky ny asany, ny karazan-javatra ary ny zavatra hafa ilaina, dia mandehana izany torolàlana SEO tsy maintsy fitadiavana mari-pahaizana ho an'ny vao manomboka an'i Semalt.
Ny tanjon'ny fikarohana rehetra dia ny hanome valiny mahasoa sy mahasoa haingana araka izay azo atao. Ahoana anefa no hamantaran'izy ireo hoe misy ifandraisany sy ilaina ny vokatra?
Eny, misy ny algorithms hahitana raha ny valiny dia afaka mitarika ny mpampiasa amin'ny votoaty sarobidy na tsia. Rehefa manamarina ny milina fikarohana fa ny sombin-javatra iray dia afaka manome sanda ambony indrindra, izy ireo no manao izany.
Fikaroham-bahaolana fikarohana Optimized
Ny votoatin'ny fikarohana motera, na ny atiny manana kalitao avo lenta, no eken'ny milina fampahalalana hahazoana mandaitra ireo mpikaroka. Ny votoatiny tena namboarina indrindra araka ny motera fikarohana no laharam-pahamehana.
Aoka hatao hoe manomboka mitady fikarohana momba ny vokatra tsara amin'ny Google ianao. Ao anatin'ny iray segondra latsaka, segondra iray dia hiseho eo amin'ny efitraninao misy valiny mifanaraka sy mahasoa.
Ny valiny voalohany amin'ity lisitra ity dia misy ny votoatin'ny search engine optimized.
Ireo singa ao amin'ny fikarohana Engine Optimized content
Ny fampahafantarana sy fanamafisana ny singa atiny samihafa dia manapa-kevitra raha ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana na tsia.
Ireto misy singa voalohany amin'ny votoatin'ny fikarohana fikarohana rehetra:
Rehefa mikarakara ireo singa ireo ianao dia hampahafantatra ny votoatinao amin'ny maha-sarobidy anao ny milina fikarohana ary manao ny laharana voalohany. Andao atao tsirairay hahatakatra azy ireo isika.
Ny fampahalalana dia zavatra iray momba ny olona iray na zavatra tianao hatolotra ny mpihaino anao. Izy io dia mety ho amin'ny endrika fampahalalana, tarehimarika, torolàlana, torohevitra, fitarihana, na izay tadiavinao homena.
Hamarino tsara fa marina ny mombamomba anao atolotra ary aza afangaro amin'ny mpihaino anao.
Ny tanjona dia ny fandefasana ireo mombamomba ireo. Izy io dia afaka manabe, mampahafantatra, mampahafantatra ny tenanao ho malaza, mampiditra ny orinasanao, na zavatra hafa. Ny tanjonao dia misy koa ny fanantenanao rehefa avy nampita izany fampahalalana izany amin'ny mpihaino.
Hamarino tsara fa amboarinao amin'ny fampahalalana amin'ny mpihaino izany vaovao izany ary mahafeno ny tanjonao.
Ny mpihaino dia olona na vondron'olona irinao handray ny vaovao. Ny fampifandraisana ny mpihaino havanana dia manampy anao hametraka zavatra toy ny antsipiriany, ny feo ary ny fisehon'ny fampahalalana tianao homena.
Fantaro ny mpihaino kendrenao, ny filàny, ny olana atrehiny, ary ny fanontaniana mety apetrany aorian'ny nahazoanao ny fampahalalana anao. Mamolavola ny votoatin'ny ivon'ny mpihaino anao, fa tsy zavatra hafa.
Ny endrika no fijery farany ny vaovao rehefa atolotrao amin'ny mpihaino anao. Fantaro hoe ahoana no ahafahan'ny mpihaino kendrena anao hahatakatra azy tsara indrindra - amin'ny endrika soratra, sary, feo na sary.
Voalohany, manapa-kevitra ny fototry ny votoatinao - mampahafantatra, mampihetsi-po, mahery vaika na mahatsikaiky. Avy eo misafidiana ny fomba tianao hanolorana azy.
Ny fantsona no haino aman-jery izay ahitanao ny mpihaino anao. Izy io dia mety ho tranonkala, bilaogy, sehatra media sosialy, fampiharana finday, fahitalavitra, gazety, na izay mety hifandray tsara amin'ny mpihaino kendrena anao.
Hamarino tsara fa misy ny atiny amin'ny alàlan'ny fantsona ifantohan'ny mpihaino kendrena anao.
Ny votoatin'ny Optimized dia zava-dehibe satria manampy ny laharan'ny tranokalanao ho ambony amin'ny pejin'ireo valin'ny fikarohana. Hanatsara ny fahitana amin'ny Internet ihany koa izany.
Raha mamorona votoaty azo antoka, alao antoka fa izy io dia ivon'ny filàn'ny mpihaino kendrena anao, ary ny fikarakarana rehetra ny votoaty fikarohana optimista dia voakarakara tsara.
Ankoatr'izay, mila mandinika antony ara-teknika maro ianao toy ny teny fanalahidy, URL, famaritana meta, titre meta ary ny hafa.
Misy dingana vitsivitsy tokony harahin'ny tsirairay mandritra ny famoronana votoaty avo lenta. Izy ireo dia:
1. Fikarohana fikarohana momba ny teny
Ny fikarohana teny fanalahidy no zavatra voalohany tokony hataonao satria ireo teny manan-danja ihany no miantoka fa ny votoatinao dia hita amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana.
Mandritra ny fikarohana dia andramo ny hisorohana ireo teny fanalahidy tena mifaninana ary aleonao teny ambony misy ny teny fanalahidy lava. Azonao atao ihany koa ny mandray fanampiana fitaovana fikarohana fikarohana mahomby, toy ny Keyword Planner avy amin'ny Google.
2. Farano ny Lohahevitra
Rehefa avy misafidy ireo teny fanalahidy mety ianao dia tokony hamarana ny lohahevitra atiny. Ho an'ny laharana ambony dia ilaina ny mampifanaraka ny lohahevitra amin'ny teninao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny loha-hevitrao dia tokony ahitana ny teny fanalahidy.
3. Mamorona drafitra
Ankehitriny, tokony hamorona drafitra izay hitranga amin'ny atiny rehetra ianao. Manapa-kevitra ny lohateny, firy ny lohateny, sary ary taorian'ny teny firy.
4. Ataovy mora vakina
Ataovy vakiana mora foana ny votoatinao amin'ny alàlan'ny famakiana azy amin'ny andalana kely amin'ny andian-tsoratra 1-2. Manampia sary / dikanteny isaky ny teny 150-250.
Tena mandany fotoana ao anaty pejy web iray ny mpamaky. Raha tsy mahita zavatra mahaliana mifikitra izy ireo dia hiala.
5. Aza miala amin'ny lohahevitra
Rehefa mamorona ny atiny ianao, mifikitra amin'ny lohahevitra. Tsy ilaina ny hampiditra ny zava-drehetra ao amin'ny sangan'asa iray. Mifantoha amin'ilay lohahevitra ary miezaha hampahomby azy.
6. Mifikitra amin'ny target Keyword
Ny votoatinao dia tokony ho ivon'ny teny fototra kendrenao. Raha tianao ny laharana voalohany, mifikitra amin'ny teny fototra kendrenao ary aza mikendry teny marobe.
7. Ampidiro rohy
Fantatry ny milina fikarohana fa azo atokisana ny votoatinao raha toa ka misy rohy mankany amin'ny tranokala misy mifandraika, azo atokisana ary manam-pahefana. Ataovy azo antoka fa mifandraika amin'ny tranokala voatondro ny teny ampiasainao hamoronana rohy.
Ohatra, jereo ny rohy eto ambany misy ilay teny hoe 'Torolàlana SEO ho an'ireo vao manomboka.' Rehefa manindry an'io rohy io ianao dia hamerina mankany amin'ny tranokalan'ny Semalt, izay hahitanao ny zavatra mitovy voaresaka ao anatin'ity rohy ity.
Ny fandanjalanjana ny votoatiny noforonina dia midika fa miditra amin'ny lafiny teknika amin'ny fanatsarana votoaty ianao.
Ao anatin'izany ny fanamafisana an'ireto manaraka ireto:
Andeha hianarantsika tsirairay:
Ny firafitry URL amin'ny tranonkala iray no zavatra hitan'ny mpampiasa voalohany. Raha tsy ahitana ny teny fanalahidy mifandraika amin'izany ny URL-nao, dia mety tsy hitsidika ny tranokalanao ny mpampiasa.
URL iray miavaka sy lava no mampatahotra ireo mpampiasa fikarohana, ary misalasala ny tsindrio ilay rohy izy ireo. Azafady amin'ireto rohy telo ireto voalaza etsy ambany ireto:
https://semalt.com/fullseo - Ireo mpampiasa dia avy hatrany hahatakatra fa io rohy io dia hitarika azy ireo amin'ny pejy iray amin'ny tranokalan'ny Semalt izay misy fampahalalana momba an'i FullSEO. Tsy hisalasala izy ireo hanindry an'io.
https://www.nytimes.com/2008/06/27/technology/27google.html?_r=3&adxnnl=1&oref=slogin - Ny mpampiasa dia mety tsy ho azo antoka 100% fa afaka maminavina fa ny fikainganana azy dia mety hitondra azy ireo ao amin'ny pejin-tranonkala misy azy. fampahalalana mifandraika amin'ny SEO.
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=588707 - Tsy azon'ny mpampiasa ny dikan'izany rohy izany. Noho izany, misalasala ny tsindrio azy ireo.
Lohatenin'ny lohateny no lohateny (azo kitihana) izay hitanao amin'ny valin'ny fikarohana. Manampy an'i Google sy ireo milina fikarohana hafa izy ireo, mahatakatra ny votoatinao.
Ny marika lohateny ihany koa no manapa-kevitra rehefa mila misafidy ny valim-pikarohana mety indrindra ny mpampiasa. Diniho ireto zavatra efatra lehibe ireto raha manatsara ireo marika lohateny:
Manomeza marika manokana mandritra ny famoronana ny bokin-dahatsoratra
Aza asiana bizina ny marika lohateny amin'ny tenimiafina maromaro.
Ataovy azo antoka fa tsy mihoatra ny 60 litera izy.
Ny teny fanalahidy kendrena dia tokony atomboka amin'ny voalohany.
Ny snippet an-tsoratra kely izay hitanao eo ambanin'ny lohatenin'ny lohateny / lohateny azo tsindrio ary antsoina hoe URL ny famaritana Meta.
Ny famaritana momba ny meta misy fampahafantarana sy momba ny saika misy ny teny target no mahasarika bokotra maromaro kokoa. Diniho ireto zavatra telo lehibe ireto raha manantena famaritana meta:
Ataovy azo antoka fa tsy misy mihoatra ny 160 ny endrik'ilay lahatsoratra.
Ataovy fohy kely sy voafaritra manokana momba ny atiny ny snippet.
Ampidiro ny teny fototra kendrena sy ny teny manan-danja.
Ity lahatsoratra ity dia nanazava ny antony maha-zava-dehibe ny SEO ny momba ny votoatiny sy izay azonao atao mba hamoronana votoaty optimized optimization.
Ahoana raha tsy izany rehetra izany sy ny mpanoratra mpanoratra manam-pahaizana bebe kokoa?
Ireo mpana- mpanoratra manam-pahaizana ao amin'ny Semalt dia tsy hoe mikarakara afa-tsy ny votoatinao fa alao antoka ihany koa fa manintona ny lisitry ny valin'ny fikarohana Google ary miteraka fahalianan'ny mpampiasa.
Fa maninona Semalt?
Ny tompona orinasa na tranokala tsirairay dia mila votoaty ho an'ny pejin-tranonkala, lahatsoratra bilaogy, sehatra media sosialy, fomba fitari-dalana, sy ny hafa.
Raha manakarama mpanoratra manontolo andro izy ireo dia mety tsy mifanaraka amin'ny volany. Ary, ny freelancer iray dia mety hanokana fotoana betsaka hamoronana votoaty.
Miteraka fisavorovoroana ao an-tsain'ny ankamaroan'ny orinasa na tompon'ny tranokala ary tsy azon'izy ireo izay tokony hatao.
Eny, tsy ny zava-misy ny misavoritaka fa ny mieritreritra ny vahaolana / Semalt. Ny mpanoratra mpanoratra manam-pahaizana ao amin'ny Semalt dia manome antoka fa ny fikarakarana ny votoatinao rehetra dia arakaraka tsara.
Indraindray raha toa ka mahavita mandini-tena ny zavatra, ny olona dia manao fahadisoana kely izay misy fiantraikany amin'ny laharan'ny tranonkalany. Mba hialana amin'ireo traikefa toy izany dia tokony handray ny mpanoratra mpanoratra manam-pahaizana momba ny Semalt ianao.
Semalt + votoaty avo lenta = Hanankarena ianao.